Sheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 6
Home Love Story Sheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 6aad
Sheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 6aad
ku fikiraayey Amina Sahrana marnaba ninkeeda kama shakin hadba cudur daarka uu bixiyo ayaa ay maalin walba aamintaa mar uu yiraahdo shaqadaa badneyd iyo mar uu yiraahdo madaxaa I xanuunayo.
Sadiq ugu dambeyn waxa uu go’aansaday inuu arrinkaan uu kala hadlo saxiibkii Diini oo uu telefoon kula hadlay balse markii dambana waxaa la isku raacay in la kulmo markii ay shaqada ka soo baxeen ay ku kulmeen Cafeteria magaalada ku yaalay waxaana dhex martay doodaan.
Saaxiibow waan waalan rabaa ma aqaan waxaan sameeyo noloshii in aan naco ayaan ku dhowahay.
Waxba ha is dhibin saxiiboow bal wax ii sheeg ma warkii Hooyadaa miyaad wadaa mise waxaad ka shakisa ayaa jira.
Saxiibow waxaan ka shakiya ma arag laakiin warkaan ayaan I qasayo sideen yeelaa
Is deji walaal hana is qasin nolosha kalsooni ayaa ay rabtaa ee naftaada ku kalsoonaaw
Saxiibow wax kasta oo la ii sheego maskaxdeyda waa qaadan la dahay maxaan yeelaa wax kale iskaba daayee Amina waan ka jeestay kalsoonida waan lumiyey saaxiib.
Waxaad igula muuqataa nin go’aan gaaray laakiin wax walba mugdi ma ahaan karaan wax lagu qancana waaa jiraan bal maxay tahay shakiga kugu weyn ee aad hadalka hooyadaa ku aamintay.
Waa runtaa wax kale maaha Amina 27 maalmood markaan wada joogtay ayay in ay uur leedahay ayaa ay ii sheegtay taa ayaan shakiga igu weyn ah saaxiiboow.
Soo xasuuso xaaskeyga markii in qalo ay dhaqaatiir diideen wax kale ma jirin markii qaliinkeeda la ogolaaday baarintii ayaa lagu ogaaday in ay leedahay uur 15 maalmood ah marka wadan horumarsan ayaa joognaa waad ogaan kartaa haddii aad shaki qabto balse dhinaca kale 27 maalmood uur jiro waa sii ogaan karaa taana ku fikir saaxiib.
Ma aqaan saaxiib waxba ma fahmo shakina ma ku noolaan karo
Ii sheeg go’aanka aad qaadatay
In aan sugo ilaa ay dhasho kadibna aan si qarsoodi aan DNA Test aan ku sameeyo mana rabo in ay iga shakiso
Ma cunugaad iyada oo aan ogeyn qaadeysaa
Saxiiboow siyaabo badan ayaa DNA test loo sameyn karaa sow ma ogid in xataa Timaha lagu ogaan karo marka sidii ii suurowdo ayaan yeelayaa.
Miyaadan ogeyn in cunuga isaga oo uurka hooyadii ku jira in la ogaan karo maad sidaa yeeshid haddii aad shakigaan ka baxeyso.
Dhinaca kalana ma rabo in ay Amina shakigeyga ogaado
Ma filaayo talo kasta oo aan ku siiyo in aad qaadaneyso laakiin taada ayaan kuu yeelayaa Amina waa qof kula degan waa gabar aad jaceyl ku guurasatay side u yeeli kartaa in aad ka qariso murugta sidaan oo dhan kaaga muuqato.
Mudooyinkaan ma dhicin in ay iga shakiso laakiin iminka qorsho ayaan wadaa in ay xafiiska Blackburn ay shirkada ku leedahay u badashto ilaa mudo.
Waxaad igula muuqataa nin masuuliyadiisa ka dhuumanayo in aad tahay laakiin xaalkaaga waan kuu deeyey waxaanse kugu duceynaa in illaahey shakiga kaa saaro.
Sidii ayaa ay ku kala tageen qof kasta gurigiisa ku aaday Sadiiq is moogsisi ayaa uu ku jiray mudo Amina Sahrana qowlkiisa ayaa ay qaadan jirtay
Mudo labo bilood ayaa ka soo wareegatay maalintii murugda u bilaabatay Sadiiq welina kama tagin London mana ku guuleysan inuu shirkada ka dhaadhiciyo in xagaa waqooyiga England magaalada ku taal ee Blackburn loo badalo.
Amina markaan yaab badan ayaa ka soo haray isbadalka Sadiiq wax badan ayaa ay is weydiisay caawana markii qolkii hurdada la isu tagay ayaa ay hadalka furtay Amina oo tiri
Macaane sidee dareemeysaa maalmahaan caafimadkaga ma fiicna maxay tahay dhibka jira
Sadiiq oo si isu maahinayo ayaa la soo booday
Maya waxba ma jiro yaa ku jiro dhib ayaa jiro
Waan dareemi karaa inuu dhib jiro waliba adiga uu ku heysto oo aadan ogoleyn in aan ogaado ii sheeg ma dhinaca noloshaa mise meel kale aniga xaaskaaga ayaan ahay in aan kula xaliyana diyaar ayaan u ahay wax kale ma jiraan.
Sida aad wax u sawiratay wax uma jiraan ee waa waqti dambe seexo macaanto
Dhib ku heysto oo aadan dooneynin in aad ii sheegto ayaa jira wax walba noloshaadii waa ay badalantay farxadadii qosolkaagii waliba masuuliyadaada waa ay ku baaba’eysaa aniga & uurkeyga nagama warheysid qancintii ay nafteyda kugu laheyd waad ilaawday habeen kasta dushaa I aadisaa ma fahmin Sadiiq ii sheeg dhibka iminka yimid ma mid aan aniga wadaa mise meel kale ayaa uu qiiqaan dabkiisa ka shidan yahay.
Dhib ma jiro balse xagga shaqada ayaa la moodaa in Blackburn la ii badalo waa intaa
Taa maxaa ku jaban meeshii lagu badalo ayaan degeynaa maa taas dhib la dhahaa waa ku sidee
Aniga London ayaan jeclahay meel aan ku doorsanayo ma jirto taa ayaana badalka u diidayaa
Laakiin laguma badalin waxba ha isku murjin
Sadiiq oo iska dhigdhigayaa inuu taladeeda qaadayo ayaa yiri
Ok macaanto ma loo baahna in cabsi aan jirin aan murugteeda sii qaato waa xilli dambe beri waqti hore ayaad baxayaa habeen wanaagsan
Amina Sahra inta ay u soo dhawaaday ayaa ay dhunkatay oo ay tiri
Wanaagsan macaane qalbi degan ayaan kuu rajeeyey berina dhaqtarkeyga ayaan tagayaa si xaalada uurka wax aan kaga ogaado ka waran haddii aad ila tagto
Miskiin yaa u sheega in cuqdada iyo murugta in ay tahay uurkeeda
Ma filaayo xabiibti maxaa yeelay shaqada waa ay badan tahay keligaa tag wixii aqbaar tell ii soo dir
Ok macaane riyo qurxoon ayaan kuu rajeeyey
Sadiiq cabsidii uu qabay uun ayaa ku sii korodhay suntii ay hooyadii ay sumeysayna waxa ay ku noqotay inuu shaki badan ku noolaado.
Waxaana saaka markii uu shaqada tagay loo sheegay in mudo 3 bilood uu ka soo shaqeyn doono Blackburn oo codsigiisa loo ogolaaday Sadiiq sidii in Jano loo balan qaaday ayaa uu ugu farxay wuxuuna sii doorbidi lahaa in 6da bilood ee uurka Amina ka dhiman inuusan arag Sadiiq waxa uu ahaa nin go’aan qaadashana ku xun waana sababta uu murugta ugu nool yahay.
Markii uu xaafada yimidna waa uu u sheegay xaaskiisa inkastoo Amina soo jeedisay inuu meesha guri kaga raadiya hadana Sadiiq waa uu ka madax adeegay in deegaankooda uu mar kasta yahay London ayaa uuna u sheegay.
Waqti ma heyninee isla maalintii xigtay ayaa uu aaday Magaaladii loo badalay wax kasta isaga waxa ay la laheyd fursad qaali oo soo martay mar haddii uu awoodo in uu murugtiisa uu ka qariyo Amina maxaa yeelay hadalkii Hooyo Baluush udin ku taagan ayaa uu ahaa dhinaca kalana xaaskiisa ma dooneynin in wax uusan hubin inuu ku waayo.
Aamina Sahra waa ay ku qasbaneyd in ay aqbasho warkii ninkeeda gurigeedii ayaa ayna ku hartay iyadoo caawimaad ka heleysay asxaabteeda oo mar kasta guriga ku soo booqan jiray magaalada la aadi jiray.
Sida Amina looga tagay oo kale Fartuun waa looga tagay waxayna iyada iyo Ayaanle ku xariiraan Mailka oo ay inta badan fadhiso xataa ay gaartay heer ay waalidkeen ay ku dhacaan lacag aan internet ku aado ayaan rabaa markii ugu dambeyn loo diiday waxa ay warsan jirtay Farxaan oo ka bixin jiray.
Ayaanle inta badan waxa uu noqday nin la qabsaday nolosha Eastlight ee magaalada Nairobi marnaba dib uma xasuusan Fartuun ileyn markii horeba daacad uma aheyn xiriirka kala dhaxeeyey.
Fartuun markii ay ku daashay in aan loo soo jawaabin mailalkeeda isla markaana aysan awoodin in ay tell u dirto si kasta oo ay baaqdana kama soo daba galo nolosha quus ayaa ay istaagay naf ay xakameyn kartana kuma oolin waxayna mar kale talo ula tagtay Farxaan oo ay u arkeysay inuu la xalin karo dhibkeeda.
Xilligaa Farxaan waxaa la joogay saaxibkii Xasan Kaafi oo ka soo noqday Ethiopia uguna sheegeyey jaceylkii Fartuun u qaaday sida uu ku guuldareystay iyo in ay naftiisa ku adkaatay in ay guuldarada aqbasho Xasan Kaafi oo aan hadal la qaban ayaa ku yiri naag aan ku rabin waxba nafta ha ku sii dhibin ee badweyn dumar dabaalo.
Iyadoo weli sheekadii lagu jiro ayaa ay soo gashay Fartuun oo ay u sheegtay in ay Farxaan u baahan tahay Xasan Kaafi oo gartay ayaa yiri waan sii baxayaa waxaana isu keliyoobay Farxaan & Fartuun waxaana hadalkii furtay Fartuun oo tiri.
Farxaanoow mar kasta waxaa tahay midka dhibka ila xaliyo
Waa runtaa maxay tahay dhibka jira
Waa xagga Ayaanle jaceylkeygii ugu horeeyey ayaan weli ku dhibtoonayaa dartiis reerkeyga waa ay igu naceen intaan lacag ayaan raadshaa iminka wax mail iima soo dhirin mudo bil oo anigaa intaa maalin kasta mail u diri mana ii soo jawaabo.
Telkiisa maad ka wacdidi
Sow lacag lagu Waco looma baahan adigana kaar ma gadid haddii aad ii amaahi laheyd maxaan yeelaa.
Ii sheeg maxaad jeceshahay ama ay kula tahay in aad kugu saacidi karo
In aad kaar ii iibiso ayaan rabay
Shan doolar ma kugu filan tahay.
Dalxiisayaal Faransiis ah oo lagu diley dalka Niger